Monday May 31, 2021 - 19:20:20 in Wararka by Xarunta Dhexe
Ruja Ignatova waxay isku magacowday boqoradda lacagta labanlaabta. Waxay dadka ku nool guud ahaan caalamka u sheegeysay inay soo hindistay barnaamij lacagta lagu badiyo, iyadoo la tartameysay barnaamijka la yiraahdo Bitcoin ee lacagaha lagu shubto, w
Ruja Ignatova waxay isku magacowday boqoradda lacagta labanlaabta. Waxay dadka ku nool guud ahaan caalamka u sheegeysay inay soo hindistay barnaamij lacagta lagu badiyo, iyadoo la tartameysay barnaamijka la yiraahdo Bitcoin ee lacagaha lagu shubto, waxayna dadka ka dhaadhicisay inay ku maalgashadaan balaayiin doolar. Ka dib labo ka hor, waxaa mar qura la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigtay.
BBC-da ayaa muddo labo bilood ah baaritaan ku heysay sida ay haweeneydaas ugu suurtagashay inay khiyaanadaas lacag badan ugu dhacdo iyo meesha ay suurtagalka tahay inay ku dhuumaneyso.
Horaantii bishii June ee sanadkii 2016-kii, haweeney ganacsato ah oo 36 jir ah, laguna magacaabo Dr Ruja Ignatova, ayaa soo istaagtay masraxa Wembley Arena ee magaalada London, waxaana u sacbinayay kumannaan taageerayaal ah oo la dhacsanaa qorshaheeda.
Waxay ku labisneyd dhar qaali ah, waxayna xirneyd dhago dhaadheer oo ka sameysan dheeman.
Waxay dadweynihii u sacbinayay u sheegtay in barnaamijdeeda OneCoin uu ahaa mid ay dooneysay inuu noqdo barnaamijka ugu weyn caalamka ee lacagta lagu labanlaabo, "qof walbana lacagtiisa lagu siinayo meel kasta oo uu joogo".
Dr Ruja oo ka hadleysay masraxa Wembley Arena
Bitcoin wuxuu ahaa barnaamijkii ugu horreeyay ee lacagaha lagu badiyo, walina waa kan ugu weyn ee la garanayo - qiimihiisu wuxuu kasoo billowday lacag aad u yar, ka dibna wuxuu gaaray boqollaal doolar sanadkii 2016-kii. Lacagahaas waxaa si toos ah loo siinayay dadka ka qeyb qaata ama lacagahooda ku shubta.
Cryptocurrency wuxuu sidoo kale ku dhisnaa fikrad si guud ula xiriirta lacagtaada oo kuu badaneysa, dad badan ayaana u dagdagay inay ka faa'iideystaan fursaddaas cusub.
Dr Ruja waxay dadkii dhageysanayay u sheegtay in barnaamijkeeda OneCoin uu yahay "kii looga takhalusi lahaa Bitcoin". "Muddo labo sano gudahood ah, ma jiri doono qof ka hadlaya ama lacag ku shuban doona Bitcoin!", ayey tiri iyadoo kor u qeylineysay.
Guud ahaan dadka ku nool daafaha caalamka waxay billaabeen inay maalgashadaan ama lacagahooda ku keydsadaan OneCoin, iyagoo rajeynayay inay qeyb ka noqdaan ol'olahan cusub ee lagu badinayo lacagaha.
Warqado ay BBC-da heshay ayaa muujiyay in dadka ku nool Britain ay barnaamijkaas ku dareen lacag kor u dhaafeysa 30 milyan oo doolar, lixdii bilood ee ugu horreysay.
In ka badan 2 milyan oo doolar oo ka mid ah lacagtaas waxaa lagu maalgashaday hal isbuuc gudihiis. Sidaas ayuu sare ugu sii kacayay qiimaha lacagta lagu darsanayay OneCoin.
Intii u dhaxeysay bishii August ee sanadkii 2014-kii ilaa bishii March ee sanadkii 2017-kii, in ka badan 4 bilyan oo doolar ayaa lagu maalgashaday barnaamijkaas, waxayna lacagtaas ka kala timid dadka ku nool qaar badan oo ka mid ah dalalka dunida.
Dalalkaas waxaa ka mid ahaa Pakistan, Brazil, Hong Kong, Norway, Canada, Yemen iyo xitaa Falastiin.
Waddamada ugu badan ee shacabkoodu ay lacagta galiyeen barnaamijkan waxaa ka mid ah Shiinaha, Jarmalka, UK, Mareykanka iyo Hong Kong.
Laakiin waxaa jirtay arrin muhiim ah oo aysan ka warqabin dadkan maalgashadayaasha ah. Taasoo ah in aysan marnaba ka fikirin qaabka uu barnaamijkan u shaqeynayo iyo sida lagu aamini karo.
Muddo dheer ayey dad kala duwan isku dayayeen inay sameeyaan qaab ay dhinaca Internetka ugu abuuraan barnaamijyo lacago lagu shubto, laakiin way ku guul darreysanayeen, sababtoo ah ma jirin cid aamineysay. Waxaa laga baqaa khiyaano, wayna sahlan tahay in wax la been abuuro.
Sababta ay dad badan u xiiseeyaan Bitcoin waa in ay shirkaddu xallisay dhibaatada aamindarrada. Waxayna u shaqeysaa qaab la isku halleyn karo.
Dr Ruja waxay si caqliyeysan usoo aruurisay dhammaan macluumaadka howsha u ekeysiinaya mid sax ah oo lagu kalsoonaan karo.
Laakiin waxaa jiray wax khaldan. Horaantii bishii October ee sanadkii 2016-kii - oo ahayd 4 bilood ka dib markii ay Dr Ruja kasoo muuqatay London - khabiir ku takhasusay lacagaha keydinta looga ganacsado, oo lagu magacaabo Bjorn Bjercke ayaa laga soo wacay shirkad shaqaale raadieneysay.
Waxaa loo sheegay mushaar badan oo ah bishiiba £250,000.
"Waxaan ku fikirayay: 'Sidey noqon doontaa shaqadeydu? Maxay tahay howsha aan u qabanayo shiraddan?", ayuu yiri isagoo dib u xasuusanaya sheekadaas.
"Ninkii isoo wacay wuxuu ii sheegay inay rabaan qof khabiir ku ah lacagaha keydinta looga ganacsado. Markaasna aysan heysanin khabiir noocaas ah'.
"Anigana waxaan ku iri: 'Maxaa tiri? Waxaad ii sheegtay in shirkaddu ay tahay mid ka shaqeysa lacagaha keydinta looga ganacsado, sidey ku dhacday inaydaan khabiir lahayn".
Ka dib ninkii wakiilka ahaa ee soo wacay ayaa u sheegay in ay hadda markii ugu horreysay raadinayaan qof khabiir ah, muddona ay shaqada wadeen.
"Magaceed shirkaddan", ayuu yiri Bjercke, oo su'aal weydiinaya wakiilka.
"Waa shirkadda OneCoin."
Shaqadii ma uusan qaadanin, sidaas ayuuna ku dhaafay.
Riyadii 'taajirnimada' ee Jen McAdam
Maalin maalmaha ka mid ah, Jen McAdam ayaa qof ay saaxiib ahaayeen ka heshay farriin loogu sheegayo shirkaddan cusub ee fursadda weyn ay ku jirto, isla markiina waxay eegtay bogga ay ku leeyihiin internet-ka.
Jen McAdam oo ka qeyb qaadaneysay barnaamij ka baxay BBC-da
Muddo saacad ah ayey dhageysaneysay macluumaadka ku jiray halkaas, waxaana loo sharraxay fursad 'taajirnimo ah' oo ku jirtay barnaamijkaas.
Waxaa faahfaahin laga siiyay taariikhda Dr Ruja, oo ah haweeneyda soo hindistay barnaamijkaas. Arrimahaas oo dhan ayaa soo jiitay McAdam, waxayna dareentay farxad, iyadoo rajeyneysay inay ka faa'iideysan doonto.
Waxay go'aansatay inay ku maalgashato lacag dhan €1,000. Hal isbuuc ka dib, McAdam waxay ku shubatay lacag lagu noqonayo "taajir" oo ah €5,000, sida ku xusneyd macluumaadka barnaamijka.
Waxyar ka dib, waxay ku shubatay €10,000, markii dambena waxay saaxiibadeed iyo qoyskeeda kasoo aruurisay €250,000 .
Waxay Online-ka ka daawaneysay faa'iidada lacagteeda oo sare u kacday, oo dhaaftay ilaa £100,000 - waana toban jibaarka intii ay iyadu shakhsi ahaan ugu shubatay.
Waxay billowday inay qorsheysato safarro damaashaad ah oo ay meelo badan ku aadeyso, maadaama ay moodeysay inay usoo socotay lacag badan.
Muddo ka dib, dhammaadkii sanadkaas, waxaa loo sheegay in lacagteedii oo dhan ay halkaas ku gubatay.
Gobolka Ntangamo ee dalka Uganda, oo aan sidaas uga fogeyn xadka Rwanda, inta badan dadka ku nool waa beeraleey abuurta mooska, bataati macaanka iyo digirta, iyagoo ka raadiya nolol maalmeedkooda.
Sanadkii 2016-kii, Daniel Lienhardt, oo 22 jir ah wuxuu isku duway 700,000 oo shilinka Uganda ah una dhiganta ($250), isagoo doonayay inuu ku maalgashado OneCoin.
Daniel wuxuu ka mid ahaa kumannaan reer Uganda ah oo lacagahooda ku waayay barnaamijka khiyaanada ah ee ay sameysay Dr Ruja.
Dr Ruja oo la waayay
Dr Ruja waxay wali ku safreysay caalamka, si ay u fidiso barnaamijkeeda
Dr Ruja waxaa aad loogu yaqaannay inay xirato dhar qaali ah iyo rooseetada afka la marsado oo midabkeedu guduud yahay
Meelo badan ayey tagtay, dad badan ayeyna ka dhaadhicisay inay ku biiraan oo ay maalgashadaan barnaamijkeeda.
laakiin ugu dambeyntii, sanadkii 2017-kii, mar qura ayaa la waayay Dr Ruja, mana jirin qof markaas sharrixi karay halka ay aadday.
Dr Ruja waxay mar baraha bulshada soo dhigtay sawir muujinaya iyada iyo cunugeeda
BBC-da oo wadata makarafoon iyo sawirrada Dr Ruja ayaa meelo badan tagtay, si loo ogaado halka ay ku sugan tahay. Waxaan ka raadinay xaafado ay horay u dagganaan jirtay oo ka tirsan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka, waxaana weydiinnay dariskeedii iyo dad kale, innagoo tuseynay sawirradeeda.
Dad badan ayaa isku dayay inay xasuustaan, balse meelna way ku sheegi waayeen.
Ma laga yaabaa inaan u dhawaannay? Suurtagal ma tahay inay isku qarineyso bartamaha Yurub?, ma garaneyno.
Magaalada Frankfurt dabcan ma aha meesha kaliya ee ay aadi karto - laakiin way ka mid tahay meelaha ay ku dhuuman karto, balse waxaa kale oo laga yaabaa inay tagto meelo kale oo ay ka mid yihiin Ruushka iyo xitaa Dubai.
Maalmo ka dib waxaa na soo wacay mid ka mid ah il-wareedyadeenna lagu kalsoonaan karo, oo aannaan magaciisa shaacineynin, wuxuuna noo sheegay in haweeneydan ay si joogto ah u tagto magaalada Frankfurt, laakiin loo baahan yahay howl badan loo sameeyo dabagalkeeda.
"Waxaa laga yaabaa inay ogtahay inaan raadineyno, oo iyaduna ay annaga nagu qosleyso", ayuu yiri qofka nala soo xiriiray.
Finland oo soo wajahday walwal dhanka Ruushka ah
Srikanth Bolla: Ninka indhoolaha ah ee sameeyay shirkad qiimaheedu yahay $650 milyan oo doolar
25/01/2022 - 21:29:18
06/12/2021 - 22:38:59